Maamulka Galmudug oo la tacaalaya daadad kusoo rogmaday Magaalada Dhuusamareeb – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Maamulka Galmudug oo la tacaalaya daadad kusoo rogmaday Magaalada Dhuusamareeb
Maamulka , qeybaha kala duwan ee Ciidamada Qaranka iyo Shacabka Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug ayaa si weyn ula tacaalaya sidii ay isaga moosi lahaayeen daadad xooggan oo ku rogmaday Xaafadaha Magaalada.
Roobab lixaad leh oo halkaasi ka da’ay Saacado badan ayaa sababay in uu karkaarrada jabsado Biyo xireen ay Dowladdii Militariga ka samaysay duleedka Magaalada Dhuusamreeb, kaas oo aan wax dayactir ah helin muddo dheer.
Guddoomiyaha Magaalada Dhuusamareeb, Macallin Nuur Cilmi Cabdille, ayaa u mahad celiyay cid walba oo ka qeyb qaadatay howlaha lagu moosayo Biyaha, wuxuuna Bulshada ku boorriyay in ay Gacan buuxda ka geystaan.
Guddoomiyaha ayaa Ganacsatada iyo Dadka kale ee dhisanaya Waddooyinka ay Biyuhu ka gudbi lahaayeen ugu baaqay in ay arrintaasi ka waantoobaan, isla markaana ay dib u furaan si anay daadadku waxyeello badan u geysan.
Previous articleMaxkamadda ICC oo dambiyo ku heshay Bosco Ntaganda
Next articleGabar Soomaaliyeed oo xildhibaan ka noqotay Degmo ka mid ah Maraykanka
Warbixintii ugu danbeysay ee COVID19 SOOMAALIYA